Xafiiska Guddida Qandaraasyda Qaranka Somaliland wuxuu baahinayaa, isla markaana ay ku war gelinayaan dhamaan shirkadlayda ka shaqeeya ama sameeya Data Base iyo Kuwa iibiya Qalabka Furniture xafiisyadda in Guddida Qandaraasyadda Qaranku baahinayo (Data Base web portal application) loo doonayo Dawladda. Iyo Qalabka Xafiisyada oo loo doonayo Dawladda.
S/N NOOCA QANDARAASKA
1 Data Base web portal application
2 Qalabka xafiisyadda (Furniture)
Waxa lala socodsiinayaa dhamaan tartamayaasha sharafta leh inuu qandaraaskan kor kusani furmaayo 15/09/2019 isla markaana uu xidhmayo 18/09/2019 maalinta Arbacaa ah saacadu markay tahay 12:00am. Waxaana la furi doonaa Qandaraaska (Data Base web portal application) iyo Qalabka Xafiisyadda ilsa 18/09/2019, Maalinta Arbacada ah Saacadu markay tahay 11:00Am, waxaana lagu furi doonaa Xafiiska Guddida Qandaraasyadda Qaranka.
Haddaba, Shirkadaha danaynaya Labadaas Qandaraas (Data Base web portal application) iyo Qalabka xafiisyadda hakala soo xidhiidho xafiiska Guddiga Qandaraasyada Qaranka oo ku yaala shacabka Agagaarka madaxtooyada dabadeeda ama bariga Emperial hotel ama soo garaac Telphonadka ah 0634471788 ama 0634400437.